प्रहरीका पुर्व असईले गरे युवतीलाई करणी त्यसपछि उनकी श्रीमतीले जे गरिन…..! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/प्रहरीका पुर्व असईले गरे युवतीलाई करणी त्यसपछि उनकी श्रीमतीले जे गरिन…..!
प्रहरीका पुर्व असईले गरे युवतीलाई करणी त्यसपछि उनकी श्रीमतीले जे गरिन…..!
काठमाडौं । एक युवतीलाई आफ्नै अफिसमा बोलाएर करणी गर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व सहायक निरीक्षक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ५० बर्षिय नयन श्रेष्ठ र उनका ४० बर्षिय भाई ज्योति श्रेष्ठ रहेका छन् । पक्राउ परेका नयन श्रेष्ठको बिराटनगरको मुनाल पथमा काठमाण्डौं सेक्युरीटी भन्ने सुरक्षा कम्पनी रहेको बुझिएको छ । श्रेष्ठले उक्त युवतीलाई आफ्नो कम्पनीको कार्यालयमा बोलाएर करणी गरेको, उनका भाइले त्यसको भिडियो बनाएको आरोप छ । करणी गर्ने ब्याक्ति श्रेष्ठकी पत्निले उक्त भिडियो देखाएर पिडितसँग पैसा मागेको आरोप छ ।
पिडित भनिएकी युवतीको आनीबानी ठीक भने नभएको बताइएको छ । उनी यसअघि नै बाहिरबाट युवती ल्याएर बिराटनगरमा यौ’न कार्यमा लगाएको आरोपमा सजाय भोुगिसकेकी युवती हुन् । उनले दावी गरेको भिडियो भने प्रहरीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईका अनुसार २०७६ फागुन ३ गते सेक्युरिटी कम्पनीको अफिसमा बोलाएर नयनले करणी गरेको जाहेरी गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धानका क्रममा नयन र श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी राईले बताए ।
पिडितसँग पैसा मागेको दावी गरिएकी नयनकी श्रीमती भने फरार छिन् ।
पिडित भनिएकी युवतीले प्रहरीलाई दिएको बयानका अनुसार विराटनगर घर भएकी युवतीलाई नयनले फागुन ३ गते श्रेष्ठको अफिसमा बोलाएका थिए । विराटनगर मुनालपथस्थित काठमाडौं सेक्यूरिटी कार्यालयमा पुगेकी उनलाई नयनले करणी गरे भने श्रेष्ठले भिडियो बनाए ।
त्यही भिडियो देखाएर श्रेष्ठले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्दै युवतीलाई ध’म्की दिएको उनले दाबी छ । युवतीका अनुसार १२ असारमा भने नयनकी श्रीमती रसिला श्रेष्ठले त्यही भिडियो देखाएर बार्गेुनिङ गरिन् । सुरुमा घरजग्गा आफ्नो नाममा पास गरिदिन भनेकी रसिलाले पछि दश लाख रुपैयाँ दिए भिडियो डिलिट गर्ने बताएको पीडित युवतीले बयान दिएकी छन् । प्रहरीका अनुसार यो घटना भने पाँच महिना अघिको हो । जाहेरी भने भर्खरै परेको हो ।